Soft unodzivirira siketi - China Shandong Chen lu
HB07 unodzivirira siketi (kuroora mativi)
Magadzirirwo: L, M, S
Lead nerechiHebheru: 0.35 MMPB uye 0.5mmpb;
Zvokurapa X-ray unodzivirira siketi (kumupendero) chakagadzirwa yepamusoro rwokuzvarwa rabha yellow upfu.
Nyorai I mukuru kana kuenzana (0.25 MMPB), mhando II mukuru (0.35 MMPB), mhando III mukuru (0.5 MMPB).
Unodzivirira zvinhu zvinoshandiswa wenguo kunofanira zvinyoronyoro sezvo pakavha uye kubatanidzwa jira. The attenuation nerokuti chiedza mupendero uye chiedza akanyudzwa siketi munzvimbo yose mukuru 0.25 MMPB. The attenuation nerokuti pamberi nhindi inorema mupendero inoremerwa namahwindo siketi mukuru 0.35 MMPB. The vamwe attenuation nerokuti kunofanira kupfuura 0.25 MMPB.
Chikuru zvinhu zvedu:
Previous: Medical jekiseni motokari
Next: Semi-sleeve kuroorwa madziro nyoro kutungamirira jasi
Hafu-Sleeve Lead Cloth
Medical Radiation Protection bhachi
New Type Of Single madziro Protective siketi
Protection Lead bhachi
Unodzivirira Lead Clothes
Chengetedza Medical Coat
Radiation Protection Chepiri
Radiation-uchapupu Lead Clothes
Single madziro New Protective Short siketi
Single madziro Protective Short siketi
Single madziro Protective siketi
Single madziro Protective mupendero With Import Material
Single madziro Soft Protective Short siketi
Single madziro Soft Protective siketi
Single madziro Soft Split Protective mumuhara wawo siketi
Single madziro Super Soft Protective siketi
Split Kutungamirira Cloth
Split Single-vanototsigira Sleeveless siketi
Nzira Protective Clothing
X Ray Kudzivirira Clothes
X Ray Radiation-chiratidzo Kutungamirira Clothes